ဒေါ်ညွန့်ရီ(ခ)မိစန္ဒာနန် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ / ဒေါ်ညွန့်ရီ(ခ)မိစန္ဒာနန် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ October 12, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 143 Views
ရေးသားသူ: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ > မိဟံသာ
မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲရှင်?
အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ညွန့်ရီ(ခ)မိစန္ဒာနန် (Facebook)
ဖြေ-မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ တောင်းဆိုချက်ရော မိမိအနေနဲ့လည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်တယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။
မေး-အခုလို ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းက မွန်လူမျိုးတွေ၊ မွန်ပြည်နယ်သား အတွက်ဘာတွေ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲရှင်?
ဖြေ- ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အထောက်အကူပြုနိုင််မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး- တကယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အရွေးချယ်ခံရပြီဆိုပါက မွန်လူမျိုးတွေ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါသလားရှင်?
ဖြေ- ပါတီမူဝါဒနဲ့အညီ အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာပါ။
မေး- အခုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ အစ်မအနေနဲ့မြင်ပါသလဲ?
ဖြေ- လွှတ်တော်အမတ်များများရခဲ့လျှင် လူမျိုးအကျိုးပြည်နယ်အကျိုး များများလုပ်ပိုင်ခွင့်ရိှမယ်လို့ ယုံကြည်တယ် ။ အဓိက ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ၁၆ယောက်လောက်နိုင် ခဲ့့မယ်ဆိုရင်။
မေး- အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ဘယ်ကိစ္စရပ်ကိုပထမဆုံးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့စဉ်စားထားပါသလဲ?
ဖြေ- ပထမဆုံးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမှာက မိခင်ဘာသာစာပေး သင်ယူမှုရရှိနိုင်ရေးနှင့် ဒေသဖွံဖြိုးမှုကို အထိကထား လုပ်ဆောင်သွားမယ်။
မေး- နောက်တစ်ခုက မွန်ပြည်နယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထဲက ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိပါသလဲ?
ဖြေ- မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထဲက တန်းတူရေးကို အထိကထားပြီး စာပေယဉ်ကျေးမှုမြင့်တင်သွားမယ်၊ မဲစာရင်းကို အချိန်ပေးပြီး ပြန်စစ်ပေးပါ မဲစာရင်းမှာ မပါခဲ့လျှင် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ဆုံးရံှုးသွားမယ်၊ အထိကအချက်က ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲဖို့ မဟုတ်ရင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်။
မေး- မွန်လူမျိုးတွေအတွက် ဘာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါသလဲ?
ဖြေ- မွန်လူမျိုးတွေအတွက် အမျိုးသားတန်တူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုအာမခံသော မွန်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရန်၊ လွှတ်တော်ပြင်ပလွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ ပာန်ချက်ညီညီ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
မေး- နောက်ဆုံးမေးခွန်တစ်ခုက မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မီဒီယာကနေ ဘာများမှာကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ- မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မှာကြားချင်တာက ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်လူမျိုးအကျိုးအတွက် တာဝန်ခံမှုရှိသော တကယ်လုပ်ပေးမယ့်ကိုယ်စာလှယ်လောင်းများကို မှန်အောင် ရွေးချယ်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပညာအရည်အချင်း – B.Sc (Chemistry)
အလုပ်အကိုင် – အိမ်ရှင်မ
မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၀-၇-၈၅
လူမျိုး/ဘာသာ – မွန်/ဗုဒ္ဓဘာသာ
လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာ – ကနာလိုကျေးရွာ၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်
အဖအမည် – ဦးဂုဏ်ရှိန်+ ဒေါ်ထွေးစိန်
ယှဉ်ပြိုင်မည့်မဲဆန္ဒနယ် – ကျိုက်မရောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် – အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
လူမှုရေး- အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများ (အကျဉ်း)-
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို လေ့လာဆွေးနွေရေးအတွက် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အမျိုးသမီးနှင့်လူငယ်များ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးတွင်ပူပေါင်းပါဝင်မှုကို ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတွင်သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် လူငယ်တာဝန်ခံနှင့်မွန်လူငယ်များကွန်ရက်တွင် အတွင်ရေးမှုး(၃)နေရာကို တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ မွန်လူငယ်များညီလာခံတွင်လည်း ကျင်းပရေးကော်မတီဖြင့် ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မွန်အမျိုးသားပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တာဝန်နှင့် အမျိုးသမီးရေးရာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ညီလာခံအပြီးမှယနေ့ထိ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တာဝန်နှင့်လူငယ်ရေးရာ တာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ မိဟံသာ 2015-10-12
Tags ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ မိဟံသာ
Previous အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများကိုခွဲ၍ ချေမှုန်းရန်ကြံစည်နေသည်ဟု UNFC ထုတ်ပြန်
Next NCA လက်မှတ်ထိုးမည့် ၈ ဖွဲ့အနက် ၃ ဖွဲ့ကို မတရားအသင်းမှ အစိုးရပယ်ဖျက်